धेरैवर्ष पहिले बिजय कुमारले यसरी खेलिरहेको भेट्टाएका थिए रमेश प्रसाईंलाई (भिडियो सहित) -
Home Flash News धेरैवर्ष पहिले बिजय कुमारले यसरी खेलिरहेको भेट्टाएका थिए रमेश प्रसाईंलाई (भिडियो सहित)
कुनै दृष्टि’विहीनका लागि खोलि’एको विद्यालयमा मेरो यो पहिलो अ’नुभव थियो।”बिजय कुमारले भने।आवा’जको मद्धतले पला’स्टिकको झोला भित्र कागज थु’नेर त्यसको आवाज सुन्ने केही केटा:केटीहरू थिए।साना:साना नानीहरू दोहोरी खेली’रहेका थिए।
रमेशको कथा नि:र्मला ज्ञाव’लीको कथा एक अदम्य शाहसको कथा हो भने मजस्तो मेन’स्ट्रीममा लागेको मान्छे’को लागि यो एक असफलताको कथा पनि हो किनभने मैले यस्तो:मा कहिले लाग्नुपरे’न। भिडियो अन्तिममा छ
यो पनि पढ्नुहोस् – टिन एज लभ परिवार, साथीभाइ र समाजलाई राम्रोसँग बुझाउन सके किशोरावस्थामा विपरित लिंगीबीच हुने सम्बन्धलाई उनीहरूले सामान्य रुपमा लिने थिए। जसले गर्दा स्वस्थ्य सम्वन्ध विकास हुने थियो। लुकिछिपि भेटनु पर्ने र अपराध गरेको जस्तो व्यबहार सहनु पर्ने थिएन।
किशोरावस्थाको माया व्यक्तित्व विकासको आयाम हो। एक दशकअघि किशोरावस्थामा सानुले पहिलो प्रेमको अनुभूति संगाल्दा समाजबाट गल्ती काम गरेको जस्तो व्यावहार भोग्नु परेको थियो। सुन्दरलाई जीवनभर माया, सद्भाव र सम्मान गर्ने प्रेमीका रुपमा पाएकामा गर्ब गर्छिन्। दुवैले सम्बन्धमा अध्यात्मको संगम गराएका छन्। त्यहाँ शारिरीक र भौतिक सम्बन्धको कुनै गुन्जायस छैन।
एक दशकको अन्तरालपछि उनले आफ्नो पहिलो प्रेमलाई भेटिन्। र, झलझली पुराना दिन सम्झन थालिन्। सानु त्यो समाजमा हुर्किन् जहाँ किशोरहरू अपरिपक्क हुने भएकाले अभिभावकले उनीहरूको बानी, व्यबहार र जीवनका बारेमा मार्गदशर्कको भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यसैले त्यो समाज किशोराबस्थाको प्रेम मन पराउँदैनथ्यो।
उनी पहिलो प्रेमलाई सम्झेर आफैंसँग प्रश्न गर्छिन् ‘के त्यो माया थियो कि, आकर्षण मात्र? अहिले सम्झेर ल्याउँदा त्यो आकर्षण मात्र थिएन किनकि, त्यसपछि उनले कहिल्यै सुन्दर जस्तो मान्छे भेटिनन्। सुन्दरसँगको जस्तो माया, सदभाव र सम्मानको भावना अरूमा आएन। अहँ कहिल्यै आएन।
किशोरावस्थामा खुसी र स्वस्थ राख्न पारिवारिक वातावरणको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेरै’छ। जस्तै स्पस्ट नियम, स्वस्थ पारिवारिक जीवनशैली, आपसी आत्मीयता आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई नयाँ कुरा गर्न उत्प्रेरणा दिने, उनीहरूका सबल पक्षको तारिफ गर्दै राम्रो काम गर्न केन्द्रीत गर्ने। खुसी र राम्रोको अर्थ उस्तै जस्तो लागे पनि यसको फरक अर्थ हुन्छ। किशोरावस्थामा भएका छोराछोरी खुसी र राम्रो दुवै हुन आवश्यक छ।
यसो हुन सके स्वस्थ सम्वन्ध विकास हुन सक्छ। अभिभावक र छोराछोरी बीचमा दूरि हुँदैन थियो। विशेषतः किशोरकिशोरीले लुकिछिपि भेट्नुपर्ने र अपराध गरेको जस्तो व्यबहार सहनु पर्ने थिएन। चोखो प्रेम गर्नेहरूले अपराध गरेझैं आत्माग्लानी गर्नुपर्ने थिएन।
एक दिन नदेख्दा एकले अर्कोलाई खोजिरहन्थे। आज पनि उनी सुन्दरलाई ती ठाउँहरूमा खोजिरहन्छिन्। तर सम्झना मात्र बाँकी छन्। सम्झना पनि कति मिठो! सुन्दरलाई पनि याद त आउँदो हो? उसको मायाले सानुको किशोरावस्थालाई संयमित बनायो। माया दिन र लिन सिकायो अनि मायामा निवार्थ भावना हुन्छ भन्ने प्रमाणित गरायो।
उनीहरूबीच लामो समयपछि फेरि वार्तालाप सुरु भएको छ। वार्तालाप बिस्तारै बाक्लिँदै जान्छ। अतितमा सँगै बिताएका रमाइला र मिठा पल कथाका पानाझै स्वतः पल्टन थाल्छन्। सानुका आँखामा सँगै बिताएका रमाइला दिनहरू अनि आपसमा साटेका मायाका भावनाहरू छाल बनेर लहराइरहन्छन्। त्यो उमेर अनि आकर्षण! सुन्दरको अँगालोमा बाँधिदाको मुटुको धड्कन! अहो सम्झँदै धड्कन बढ्छ।
सुन्दरले छोएका हातका औंलाहरू अनि सुम्सुमाएका गाला! आज पनि कुरा गर्दा रातै हुन्छन् उनका गाला र आँखा। लाजले भुतुक्क भई जुधाएर हेर्ने सक्दैनन्। किशोरावस्थालाई सकारात्मक, सबल र स्वस्थ्य रुपमा आत्मसात् गर्दै एकले अर्कालाई सम्मानजनक व्यबहार गरेका थिए उनीहरूले।
उनीहरू आफ्नो सम्बन्धमा गर्ब गर्छन्। उनीहरू दुवैको आ-आफ्नै सुन्दर संसार छ। उनीहरू आफ्नो मर्यादालाई उत्तिकै सम्मान गर्छन्। आपसमा सहयोगीका रुपमा छलङ्ग गर्छन्। लामो समयपछि सम्बन्धले नयाँ मोड लिएको छ। यसमा दुवै खुसी छन्। हिजो किशोरावस्थामा उनीहरू शारीरिक स्पर्शसम्म पुगेका थिए, आज भने स्पर्शरहित प्रेम गर्दैछन्। गरिरहनेछन्।
केही दिन कुरा गर्न नपाउँदा सानु नियास्रो मान्छिन्। सुन्दरको मिठो बोली अनि भावपूर्ण प्रस्तुत हुने शैलीले सानुको आत्मबल बढाएको छ। सुन्दरका कुरा सुन्न पाउँदा सानु दंग पर्छिन्। उनी यो सम्बन्धलाई जिवन्त राखेकि छिन् किनकि, यो सम्बन्ध निस्वार्थ र ओभानो छ। एक्लो महशुस गरिरहेको सानुको मन र सेवाग्राहीहरुको माग र गुनासो सुन्दासुन्दा तनाव भएको क्षणबाट एकै छिन भए पनि उनी प्रफुल्ल हुन्छिन् जब सुन्दरसँग वार्तालाप हुन्छ।
सुन्दरलाई जीवन साथीका रुपमा नपाउँदा लागेको दुःख भन्दा उसलाई जीवनभर माया, सद्भाव र सम्मान गर्ने असल साथीका रुपमा पाएकामा गर्व गर्छिन्। दुवैले सम्बन्धमा अध्यात्मको संगम गराएका छन्। त्यहाँ शारीरिक र भौतिक सम्बन्धको गुन्जायस छैन। असल साथीको सम्बन्ध छ। यसैगरी उनीहरू खुसी भइरहुन्। धेरैधेरै शुभकामना ! यो लेख सुनिता खड्काले सेतोपाटीमा लेख्नुभएको छ